Ukugcina iWebhu yeHacking kwi-Bay Nge-Acunetix: Iingcebiso ezixhasayo kwi-Semalt Kuzo zonke iiWebhusayithi
I-Cybercrime kwaye ibe yinto ecacileyo, ukukhwabanisa kuye kwanda. Hackers bafumanabulumko kwaye baninzi kakhulu kwimidlalo yabo egulayo. Iingxelo zivele zibonisa ukuba azisebenzi njengabantu ngabanye kodwa kunokubaukuhlaselwa kwabantu abasondeleyo. Apha bathumela kwaye babelane ngeenkqubo ezintsha zokungena kwi-intanethi ekufuneka zinike ukulala ebusuku.Ubulungu kula mawebhusayithi kunye neeforamu zikhetheke kuphela ezimbalwa ezikhethiweyo.
Nsuku zonke ufunda malunga nokuhlaselwa okutsha kokuhlaselwa kwimihlaba yewebhusayithi ehloniphekileyoba suleleka nge-malware. Ezi zihlaselo zivula iwebhusayithi ukuba ibe yindawo yokuzisa - auto seo. Nabani na oya kutyelela iwebhsayithi ekhutshwe kwiindawo ezinobungozi obuphezuluukufumana iPC yabo ingenele.
Kutheni ulwaphulo-mthetho luqhutywe? Ewe, impendulo ilungile; kwamkelwa kwewebhuubuchwephesha obusekelwe ekuqhubeni i-e-shishini lenze indawo yokuzalisa ngokugqibeleleyo yabaxhasi. Nangona ezi zivumela ukubaishishini ukuxhuma ngokungahambisani nabaxumi kunye nabathengisi, uninzi lwezinto ezisisigxina zangaphambili ezingakhuselekanga ziye zavela.
Izizathu zokuthi kungani iwebhusayithi yakho ijoliswe ngabagculi inokuba yinto eninzi. IgorGamanenko, uMphathi weNtengo kaMthengi Semalt IiNkonzo zeDivithali, unikezela ukujonga ezinye ezimbalwa uze ubone indlela yokuzikhusela.
Ukuqhaqha ukukhutshwa kwedatha echanekileyo
Nayiphi na ishishini elisebenzayo kwi-Intanethi limele libe neenkqubo ezithile zewebhu ezivela kuyoinqwelo yokuthenga, amaphepha okungena, iifom zokungenisa, umxholo onamandla kunye nezinye iinkonzo zewebhu ze-bespoke. Ezi zicelo zewebhu zenzelweukunceda abahanjayo ukudala, ukungenisa nokufumana idatha eyimfihlo, egcinwe kwiziko ledatha..
Ekubeni ishishini lakho lisebenza ngomhla wama-24/7, naliphi na umntu ukusuka apha kwihlabathi angagqithangayo. Ngelishwa, naluphi na uhlobo lwesicelo sewebhu olungakhuselekanga luvulela umnyango wabakhweli. Ukuba bafumana ukufikelela kwiziko lakho leenkcukacha,ngoko unengxaki enkulu. Iinkcukacha zekhadi lakho lomthengi kunye nekhredithi zingathengiswa okanye zivezwe kulo lonke ihlabathi. Amakhuluyeenkampani ziye zalahlekelwa yile mithetho yezomthetho malunga nokutyhila okanye ukwebiwa kwale nkcazelo engathandekiyo. Abanye baye bavala ivenkile. Bonke baye balahlekelwaukuthembela kwabachaphazelekayo kunye nabaxhasi.
Ukukhawuleza ukuphumeza isicwangciso se-phishing
Ungacingi ukuba ekubeni i-database yakho ingaxhunyiwe kwi-intanethi kwaye ikhuselekile, ukhuselekile kwi-Hacking.Iwebhusayithi yakho inokukhohliswa ngabasebenzisi ekutyeleleni 'izilwanyana' ezinxibelelwano ezihanjiswa kumakhasi akho ewebhu. Yile ndlela abayenza ngayo: baukufaka ikhowudi kwiifayile zakho zewebhu ukwenzela ukuba umsebenzisi abuyele kwisiza se-phishing, esetyenziselwa ukufumana iibhanki zawoiinkcukacha zeakhawunti. Naliphi na i-website efunyenwe ukuba yi-phishing (nangona ukuba uyisisulu nje) inoxanduva lokugweba. Ebiza kakhulu.
Ukuxhatshaza ukusetyenziswa kakubi kwinqanaba le-bandwidth
I-Bandwidth ingaba yimpahla ebiza. Into enokuyinqwenela ukuyisebenzisaukuqhuba ishishini elingekho mthethweni njengokwabelana ngokubambisana. Xa oogunyaziwe baseburhulumenteni beza kunqonkqoza, nguwe oza kuba neyona ntokuchaza ukwenza.
Njengoko kubonakala, iwebhusayithi yakho inokungena kuyo nayiphi na isizathu. Yikholwe okanye hayiabanye abahlaseli bangena kwiwebhusayithi yakho ngenjongo ye-SEO? Queer, kunene?
I-Acunetix iya kukukhusela
Zikhusele kubaxhasi ngokusebenzisa i-Acunetix. Iinjongo ze-Complex SQL kunye nomnqamlezoukuhlaselwa kwendawo ye-site njengalezo ezikhutshwe kwiwebhusayithi ye-UN, i-United Stated Department of Security Homeland, i-Yahoo kunye ne-United KingdomIinkonzo Zoluntu zinokuthintela ngokusebenzisa i-Acunetix. Zama namhlanje. Uyakukhuseleka.